Coronavirus latest: Sweden spurned in Nordic border deal – Politicopathy
ICoronavirus yakamuva: ISweden ilahle isivumelwano semingcele yeNordic
Kwangathi 29, 2020 Kwangathi 29, 2020
Africa Asia Europe France India Kenya Russia Sweden
Isikhathi sokufunda: 14 imizuzu
Izwe laseRussia libika ngokwanda kwamarekhodi okufa kwabantu abangama-232
Izifo zaseNdiya ziyaqhubeka nokukhuphuka nolunye usuku losuku olulodwa
IFrance ne-UK zilungiselela ukuqhubekisela phambili ukuvalwa kwezikhala ngesonto elizayo
Amacala omhlaba asondela ezigidini ezingama-6 kanti okungenani angama-360,000 afile
16:52 Inenekazi lokuqala laseBurundi uDenise Bucumi Nkurunziza bekulokhu ungeniswe esibhedlela eKenya ngemuva kokuthola inkontileka i-COVID-19, ngokusho kwemibiko eminingi. Owesifazane wokuqala uphuthunyiswe eNairobi ngendiza ye-ambulensi, kubikwa i-Agence France Presse kanye neCommen TV yaseKenya. Isikhulu sikahulumeni osezingeni eliphezulu satshela i-AFP ukuthi wayiswa enhlokodolobha yaseKenya "ukuthola ukwelashwa njengoba ebamba i-coronavirus."
UMongameli waseBurundi, uPierre Nkurunziza, ugxekwe kakhulu ngokuphatha kwakhe le nkinga. Ngasekuqaleni kwale nyanga, iBurundi yaxosha ummeleli omkhulu we-World Health Organisation (WHO) nabanye ochwepheshe abathathu abaxhumanisa impendulo yezwe. Unkosikazi wakhe uDenise, ongumfundisi, udlalile phansi lolu sizi lwezifo ezinkulumweni nasezinkulumweni.
I-16: 23 La Liga, isigaba esiphambili sebhola laseSpain, uzoqhubeka ngoJuni 11 nomdlalo phakathi kwezimbangi zasendaweni iSevilla neReal Betis, kusho uMnyango Wezemidlalo waseSpain. I-CSD esitatimendeni ithe isizini izophela ngoJulayi 18, "kuya ngokwanda kwegciwane." Imidlalo izodlalwa ngaphandle kwabalandeli abakhona ukuzonqanda ukusabalala kwalesi sifo.
Iligi, enezinsuku eziyi-11 zomdlalo osasele ohlelweni lwayo, ibilokhu i-hiatus kusukela ngoMashi 10 ngenxa yombhadane we-coronavirus.
ILa Liga izokuba ngelesibili emaqenjini amakhulu ebhola likhulu e-Europe ukuba iqale kabusha. IGundesliga yaseGerman iqale kabusha isizini yayo ekuqaleni kwale nyanga futhi isiqede imijikelezo emithathu yemidlalo.
Funda kabanzi: Abaphathi bebhola laseJalimane babheka kakhulu emiholweni yezinguquko kanye nezinguquko zezezimali ngemuva kwe-coronavirus
16:06 Singapore nase China bavumile ukuvula a “Umzila osheshayo” wokuhamba nokubalulekile kwebhizinisi izinhloso.
Lokhu kuhlela kuzoqala ukusetshenziswa esifundazweni sase-Southeast Asia kanye nezifundazwe eziyisithupha zase China - iShanghai, Chongqing, Guangdong, Jiangsu, Tianjin ne Zhejiang - ngaphambi kokuthi kwandiswe kancane kancane kwezinye izifundazwe nakomasipala.
La mazwe womabili azoba nezindlela zokuvikela nokulawula ezisebenzayo ze-COVID-19. ”
IChina ngumlingani omkhulu kakhulu wezentengiselwano eSwitzerland, ngamaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-US $ 51.6 ezimpahleni nasezinsizakalweni ezithengiswayo ngonyaka ka-2019, okulingana no-13% wempahla ethengiswa yidolobha lonke.
15: 58 Timnyuziyamu yaseLouvre eParis uhlela ukuvula kabusha ngoJulayi 16 njengengxenye yokungena kalula kwe-France. Imnyuziyamu edume kakhulu kuleli lizwe esitatimendeni ithi izosebenzisa uhlelo lokubhuka kanye nohlelo olusha lokusayina lokuhlinzeka izivakashi ngokuphepha okuthe xaxa lapho kusesakhiweni. Iphinde yacela abemnyuziyamu ukuthi bagqoke imaskhi futhi bazijwayeze ukumelana nomphakathi.
Umnyuziyamu, ovaliwe kusukela ngoMashi 13, uthe iwebhusayithi yawo ithola izivakashi eziyizigidi eziyi-10.5 phakathi kukaMashi 12 noMeyi 22 ngokwesilinganiso sezivakashi ezingama-330,000 zabantu ngosuku. Iwebhusayithi yalingana izivakashi zansuku zonke ezingama-40,000 ngaphambi kwalesi sifo.
“Noma usengathola ingcebo kaLouvre cishe ngesikhathi sokuvalwa, akukho okungathatha isikhundla somuzwa wokuma phambi komsebenzi wobuciko; "Leyo yi-raison d'etre yeminyuziyamu," kusho umqondisi uJean-Luc Martinez.
I-14: 48 iSwitzerland ibike ngokufa kwayo kokuqala kwezinsana kusuka ku-coronavirus entsha. UMnyango wezeMpilo eSwitzerland uthe ingane itheleleke “phesheya” ngaphandle kokuthola eminye imininingwane. "Izingane zivame ukugula (naleli gciwane) kunabantu abadala futhi azinasifo kakhulu," kusho uStefan Kuster, inhloko entsha yezinkinga zaseSwitzerland, lapho etshela khona izintatheli eCanton of Aargau, lapho ingane yayiqhamuka khona.
Le ngane ibingelokushona okubili okwabikwa umnyango wezempilo ngoLwesihlanu, okwenza inani labantu baseSwitzerland ababulawa yilesi sifo bafika ku-1,656. Izwe selinamacala angama-30,852 aqinisekisile amacala e-coronavirus, ngamacala amasha angama-32 emahoreni angama-24 edlule.
14:31 INingizimu Afrika ithi ibhekene a emuva emuva kokuhlolwa okungafinyelelwanga okungu-100,000 ye-COVID-19 ngenxa yokushoda kwezinto zokwelapha.
"Le nselelo idalwa wukutholakala okulinganiselwe kwama-kits test emhlabeni jikelele," kusho abezempilo esitatimendeni ubusuku bonke.
Izwe selenze izivivinyo zama-coronavirus ezingaphezu kwama-655,000 kuze kube manje, ukwedlula noma yiliphi elinye izwe e-Afrika. Inamacala e-coronavirus aqinisekisiwe kakhulu kuma-27,403 XNUMX, ngokusho kwemininingwane evela eJohns Hopkins University.
I-Afrika ithembele kakhulu ekunikezelweni kwezokwelapha okungeniswa ezweni, okuye kwawa lapho amazwe ethunyelwa ngaphandle ezama ukunqoba ukuqubuka kwawo.
14: 04 A iqembu lezinkawu elenziwe ngamasampula egazi eziguli zaseNdiya obehlolwe ukuthi une-COVID-19. Iziphathimandla zasendaweni zithi abaqashi benzeka ekuqaleni kwaleli sonto ngenkathi uchwepheshe welebhu ehambisa amasampula enkulisa yasekolishi lezokwelapha eMeerut, enhlokodolobha iNew Delhi.
UDoeraj Raj, isiphathimandla saleli kolishi, utshele abezindaba zaseFrance ukuthi amasampula atholakele futhi awonakalanga. Abantu abahlala eduzane nekampasi besaba ukuthi leli gciwane lingasakazeka uma izinkawu ziletha amasampula ziye emphakathini oseduzane.
Iziphathimandla zaseMeerut kwesinye isikhathi kufanele zibhekane nezinkawu ezisolayo ezihlwitha ukudla namaselula.
13: 45 Germany urekhodile Izifo ezingama-560 ezintsha ze-coronavirus emahoreni angama-24 edlule, hhayi isibalo sangaphambilini esingama-741, iRobert Koch Institute (RKI), kusho isikhungo esilawula izifo eJalimane ngoLwesihlanu. I-RKI ayishintshanga inani lokutheleleka okuphelele, okuhlala ku-180,458.
Isazi sedatha ye-RKI sitshele abezindaba ze-DPA ukuthi lesi sibalo esingesihle ngaphambilini sasiwumphumela wenkinga yezobuchwepheshe efaka amacala amadala ku-tally.
Inani lokufa kwabantu ababulawa yileli gciwane eJalimane nalo alishintshiwe - emahoreni angama-39 edlule ukubalwa okungu-24.
13:01 ISpain unikeze ukukhanya okuluhlaza kokudalwa kwemali engenayo ebiza okungenani i- € 462 ($ 514) ngenyanga kubahlali bayo abampofu kakhulu, abaphakathi kokuthinteka kakhulu ubhubhane lweCOVID-19. Uhlelo lolu luzosiza izakhamizi ezibalelwa ezigidini ezingama-2.3, iPhini likaNdunankulu uPablo Iglesias esithangamini nabezindaba.
Abantu abaneminyaka ephakathi kuka-23 no-65 abanezimpahla ezingaphansi kwe- € 16,614, okungahlanganisi indlu noma imalimboleko yabo ehlisiwe, bazokufanelekela lolu hlelo olusha.
Njengomphumela, ukusetshenziswa kwemali ejwayelekile ukulwa nobuphofu eSpain kuzokhuphuka kusuka ngaphezu kwe-0.1% ye-GDP, eyodwa ephansi kakhulu eYurophu, kuye kufane nokwejwayelekile kwamanye amazwe angamalungu e-OECD, okungama-0.4%, kwesobunxele- kusho u-wing uhulumeni.
I-12: 43 iNorway neDenmark izoqhubeka nokuhamba mahhala phakathi kwala mazwe amabili kusukela ngoJuni 15, kodwa leyo nkululeko ngeke inikezwe omunye umakhelwane waseScandinavia, eSweden, okungenani okwamanje.
Inani lokutheleleka kwe-coronavirus lihlala liphezulu kakhulu eSweden kanti amaSweden angaphezu kuka-4,250 ashonile e-COVID-19 - amahlandla aphindwe kahlanu inani elihlanganisiwe lamanye amazwe amabili aseNordic.
Funda kabanzi: ISweden ithi ukususwa endaweni yokuhamba yeNordic kuzoba 'kwezepolitiki'
IDenmark izophinda ivule imingcele yayo kubenzi bamaholide abavela eJalimane nase-Iceland kusuka ngoJuni 15.
12: 25 Okubizwa ngokuthi igagasi lesibili lokutheleleka kwe-coronavirus eJalimane kungagwenywa kahle, ngaleyo ndlela kungakhathalelwa isidingo sokuvalwa kwendawo yonke ezweni, ngokusho kwabachwepheshe ababili abaphezulu bezwe.
"Mhlawumbe ... sizokugwema ukuwa kwesibili," uChristian Drosten ongusosayensi wezilwane etshela iphephabhuku laseJalimane Isibuko. Ngenxa yokuphatha kweJalimane igagasi lokuqala laleli bhubhane, manje sekunethuba lokuthi "izinkolelo-mbono" izakhamizi "zizodlula ngaphandle kwegagasi lesibili."
Isazi segciwane uHendrik Streeck waseNyuvesi yaseBonn uthe yize kungenzeka ukuthi kube nokuqubuka kwasendaweni ngezikhathi ezithile, njengalezo ezenzeka eLeer naseFrankfurt, eGermany akunakwenzeka ukuthi zifakaze ngokuqubuka kwesibili okukhulu. Kubikwa uStreeck Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) embikweni owandulelayo: "Angicabangi ukuthi sizobona igagasi lesibili elikhukhula lize lisiqede amandla."
Ngempelasonto edlule, ezinye izazi ezibhekele ezempilo zomphakathi zaseJalimane ezixwayisile ukuthi kungabuyiselwa igciwane lesibili kwezifo eJalimane ezivela emazweni aphesheya ngabenzi bamaholide.
12:12 AmaJalimane bebelokhu benza okuningi ukupheka ekhaya ngesikhathi sokuvala kwabo i-coronavirus, ngenkathi futhi ngisebenzisa a inani elikhulu lezithako ezintsha, kunokudla okuhleliwe, ngokusho kwenkonzo yezokudla nezolimo.
Imiphumela evela ocwaningweni oluphathelene nemikhuba yokudla iveze amanye ama-30% alabo ebuzwa ngemibuzo ukuthi bapheka ukudla ngokwabo kunakuqala kwenkinga, ngenkathi abangama-28% bethi badla kakhulu namanye amalungu omndeni owodwa kunakuqala. I-7% nje kuphela yalabo okwaxoxwa nabo bathi bakudla kakhulu ukudla okuvunziwe kunangaphambili.
UNgqongqoshe wezoLimo uJulia Klöckner uthe: "ICoronavirus ishintsha ukondliwa kwansuku zonke kwamaJalimane. Ukudla kwezifunda sekubalulekile. ”
I-11: 05 i-Iran isimemezele isibalo sazo esikhulu kunazo zonke sokutheleleka okusha cishe ezinyangeni ezimbili futhi ixwayise nokudlanga okuyisibalo esibi kakhulu eMiddle East kwezinye izindawo.
Uhulumeni useyiphakamisile kakhulu imingcele yakhe yokukhiya ngemuva kokuvezwa kokutheleleka okokuqala kwe-Iran ngoFebhuwari kodwa ibilokhu igcina iso lokuthi kuqhamuke amaqoqo aqubukayo.
Lowo okhulumela uMnyango wezeMpilo uKianoush Jahanpour uthe amacala amasha angama-2,819 aqinisekiswe emahoreni angama-24 adlule, okwenza lokhu ku-146,668 kuqinisekisiwe.
Isibalo sansuku zonke lesi siphezulu kakhulu kusuka ngo-Ephreli 2. ukutheleleka okusha bekulokhu kukhuphuka okuxakayo selokhu kwafinyelelwa ezinyangeni ezimbili eziseduze ngoMeyi 2.
10:53 Portugal ubone ukwehla okungu-98.3% ezindaweni zokuhlala emahhotela ngokuqhathaniswa nalesi sikhathi ngonyaka owedlule njengoba izindiza zazibekwa phansi, kugcina izivakashi zihambile njengoba imboni ilahlekelwe kakhulu.
I-National Statistics Institute (INE) iveze ukuthi ukuhlala kwamaBritons ubusuku bonke, umthombo oyinhloko wezokuvakasha ePortugal, kwehle ngama-99.3% ngo-Ephreli uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo ngonyaka owedlule.
Ibhodi lezokuvakasha lasePortugal selithe amabhishi ezwe kanye namahhotela azobe esekulungele ukwamukela izivakashi maphakathi noJuni. Kodwa-ke, kusenokuxaka ukuthi uzobheka kanjani ukuthi abafikayo bahlolwe yini i-coronavirus yenoveli, isilinganiso uhulumeni afuna ukusibona sisetshenzisiwe, nokuthi singalawulwa kanjani ukuthi imithetho yokuhlukaniswa nomphakathi iyagcinwa emabhishi.
Ukukhanselwa ngokuphelele kwesikhathi sezivakashi kulo nyaka kungahle kube nomphumela emnothweni wePortugal ongena ku-6%.
10:17 abalandeli bebhola lasePoland uzokwazi ukuhambela imidlalo ezoqala ngoJuni 19, uNdunankulu wasePoland, uMatusz Morawiecki umemezele, kepha zingama-25% kuphela zamandla ezinkundla ezizosetshenziswa ukuze kuqiniswe ukusatshalaliswa komphakathi kanye nokunqanda ukusakazwa kwe-coronavirus yenoveli.
"Inhlangano yebhola lasePolish kanye nePremier League bakhethe umhlaka 19, ngakho-ke bazokwazi ukulungiselela konke ngokulandela imigudu efanele," kusho uMorawiecki.
IBundesliga yaseGermany ibuye emasontweni amabili edlule kodwa ngemidlalo ngemuva kweminyango evaliwe.
I-Belarus yiyona ehlukile emthethweni, lapho ibhola liye laqhubeka lingathintwa ubhubhane.
09:45 ISpain isiqalile isikhathi sezinsuku eziyi-10 sokulila kuzwelonke kwabahlukunyezwa yi-COVID-19.
09:25 iRussia kubikwe ukuthi lenyuke kakhulu into yokushona kwabantu abangama-232, okuyisibalo esikhulu njengoba iziphathimandla zaseMoscow zikhiphe izibalo zabantu abashonile emizamweni yokuqeda iziphakamiso ababezikhohlisa.
Sebebonke bangu-4,374 19 abantu asebebulewe yi-COVID-XNUMX, ngokusho kwezikhulu zezempilo.
Iziphathimandla zikuqinisekisile ukuthi kunamacala angama-387,623, yi-United States neBrazil kuphela.
Iziphathimandla zibikezele ngesibalo esikhulu sabantu abashona ngoMeyi uma kuqhathaniswa no-Ephreli, nokusho lokhu ngokushona kweziguli ezangeniswa esibhedlela ngesikhathi kuqubuka lo mbhikisho emasontweni ambalwa edlule. Idolobha elishayeke kakhulu eRussia iMoscow kanti izikhulu zibike amanye amacala angama-2,332 XNUMX. Baphinde bakhipha imininingwane ngezibalo zokushona kuka-Ephreli ngemizamo yokuqeda izinsolo zokuthi babekade bebika ngokufa.
09: 10 In E-New Zealand, ngumuntu oyedwa manje ophethe i-coronavirus yenoveli ngemuva kokungatholanga noma yikuphi ukutheleleka okusha kweviki eledlule.
Izwe labanye abantu abayizigidi ezinhlanu selibhalise izifo eziyi-1,504 sezizonke, sekusele icala elilodwa nje. Abangu-1,481 bathole futhi abangama-22 babulawa yi-COVID-19.
08:55 Pakistan ubike ukuthi abantu abangu-57 bafa ngaleli gciwane esikhathini esingamahora angama-24 edlule, iningi labo osukwini lokuqala selokhu kwavela okokuqala ngoFebhuwari.
Inani lokufa kwabantu kuleli selimi ku-1,317. Uhulumeni uphinde wabhalisa namacala amasha angama-2,636 64,028, enyusa isibalo sabantu abangenwe ngu-XNUMX.
Bhalisela iCorona Compact - Iphephabhuku le-DW's ukulandelela coronavirus e-Asia
08:34 India urekhode enye yezinsuku ezingama-7,466 XNUMX yamacala aphezulu, ifinyelela izinombolo zaseChina, zombili ngokwezifo eziqinisekisiwe kanye nokufa kwabantu abavela kwi-coronavirus yenoveli.
UMnyango Wezempilo uthe isibalo sonke samacala eNdiya angama-165,799 4,706, okufe kuwo abantu abangama-4,634 82,995. I-China ibike ukufa kwabantu abangama-XNUMX namacala angama-XNUMX ewonke.
Ukuhlaselwa kwezifo kuza njengokuvalwa kwezinyanga ezimbili zaseNdiya ngeSonto.
Uhulumeni kaNdunankulu uNarendra Modi kulindeleke ukuthi amemezele uhlelo olusha lwemihlahlandlela kule mpelasonto, ngokunweba nokwanda kwezindawo ezindaweni ezihlasele kakhulu.
Funda kabanzi: Umthetho wobuzwe: Ngabe i-India isebenzisa abezimo eziphuthumayo be-COVID-19 ukubopha ababhikishi?
08: 12 Ngo-Ephreli, Abathengisi baseJalimane bathola ukulahleka kwabo okuyizinyanga ezinyangeni zonke kusukela ngo-2007, njengoba bekuvaliwe zonke izindlela zokukhiya.
Ukuthengisa kwehle ngo-5.1% uma kuqhathaniswa noMashi futhi ngokwe-Federal Statistical Office lokhu “ukwehla okuqinile kwezentengiso kuqhathaniswa nenyanga edlule kusukela ngoJanuwari 2007.”
Yize kunokuthi izitolo zivule kabusha njengamanje, iJalimane Retailers Association (HDE) ithe imali engenayo isazobuyela esigabeni sangaphambi kwenhlekelele. "Ngakho-ke inkinga ayisiqedi," kusho umqondisi ophethe i-HDE uStefan Genth.
Funda kabanzi: Abathengisi baseJalimane abangama-50,000 XNUMX bangaphithizela
07: 55 In Sweden, umdlalo wokuncintisana nobungcweti uvulekile ukuqala kabusha kusukela ngoJuni 14, uhulumeni umemezele, kodwa ngaphandle kwezithameli eziningi ezazikhona.
ISweden ibinendlela yokuvuselela okuthe xaxa kulokhu kuqubuka. Imisebenzi yezemidlalo yezingane, ngokwesibonelo, yaqhubeka futhi abantu abadala bakwazi ukuya emihlanganweni yokuzijwayeza.
"Manje sesivulelwa ithuba lokudlala ngokuncintisana kuyo yonke iminyaka, okusho ukuthi ezemidlalo ezisezingeni eliphakeme zingaqhubeka futhi," kusho ungqongqoshe wezamasiko u-Ammand Lind.
Imicimbi yezemidlalo kuzofanela yenzeke ngaphandle nangaphambi kwabantu abayi-50. Umqhudelwano webhola lezinyawo waseSweden manje usezobuyela esenzweni, noma kunjalo usuku oluqondile olungakaqinisekiswa.
07: 44 Iziphathimandla zezempilo zaseNingizimu Korea baye bathi bazocela ukungeniswa kwe I-anti-viral drug remdesivir yaseGileyadi ukwelapha iziguli nge-coronavirus yenoveli, njengoba kuvela amahlumela amasha.
UMnyango Wezokudla Nezidakamizwa awukakuvumeli ukungeniswa kwalesi sidakamizwa kodwa ipaneli likahulumeni seliveze ukuthi isijeziso sesikhombisile imiphumela emihle, kusho uMqondisi weCentre for Illase Control and Prevention (KCDC) yaseKorea.
Inkampani yaseCalifornia esebenza ezemithi eGileyadi ithe umuthi uzenze ngcono kakhulu iziguli ezine-COVID-19 futhi uhlinzeke ngemininingwane ekhombisa ukuthi isebenza kangcono uma inikezwa ekuqaleni kwezifo.
I-07:25 Thailand kuzophinde kudambise nezinyathelo zokuvala umnyango ngesonto elizayo, njengoba uhulumeni efuna ukufukula umnotho wezwe.
Kusukela ngoMsombuluko, amakhinema nemidlalo yeshashalazi izovulwa kabusha, kepha kube nabantu abangama-200 ngesikhathi esisodwa futhi besebenzisa izindlela ezinqala zokuphambanisa umphakathi, kusho uSomsak Roongsita, unobhala-jikelele woMkhandlu Kazwelonke Wokuphepha.
Isikhathi sokuya ekhaya sizoncishiswa ihora elilodwa, manje manje sesisendaweni kusukela ngo-11 pm kuye ku-3 am Shopping mall, avulelwe ibhizinisi ekuqaleni kwale nyanga, nawo azovunyelwa ukwelula amahora awo okuvula, wengeza uRoongsita.
"Ukuvula kabusha kuzosiza ukukhulisa umnotho futhi kudambise nemithwalo yemali," kusho uSomsak.
Ama-zoo, imitholampilo yobuhle, ama-spas, kanye nama-Thai parlors wesiko le-Thai ayobe esukuma futhi esebenza, yize kunokuncishiswa komphakathi endaweni. Izinkundla zebhola lezinyawo kanye nezinkantolo ze-volleyball ne-basketball zizotholakala, kepha kuzoqeqeshwa kuphela kanye nemikhawulo kubabukeli. Amakilabhu wokuqina angaphinde avuleke kepha ngamanani akhawulelwe akwazi ukusebenzisa izikhungo nganoma yisiphi isikhathi.
07: 00 The Ibutho lezindiza lomoya laseJapan, I-Blue Impulse, ibilokhu iphoqa isibhakabhaka saseTokyo, ukubingelela abasebenzi bezokwelapha abalwe nokuqubuka kwezifo ze-coronavirus.
Lapho ithimba lezindiza eziyisithupha zoqeqesho lwe-T-4 lithe chithi saka esibhakabhakeni esicwebile, odokotela nabahlengikazi ophahleni lwesibhedlela enhlokodolobha yaseJapan bashushuluza baphakamisa omakhalekhukhwini ukuthatha izithombe zombukiso obabazekayo.
"Kade sisebenza ngaphansi kwezinyanga ezine ezedlule ... ngabezwa (abezokwelapha) bethi lo mboniso ubakhumbuze umoya," kusho uShuichi Mikami, okhulumela isibhedlela saseTokyo's Ebara.
06: 30 Iziphathimandla ku Indonesia bebelokhu be-oda lokho okwephula izindlela zokunciphisela umphakathi ukuphinda amavesi e-Koran futhi bathole ukuminyazwa komphakathi ezinkundleni zokuxhumana.
Isiqhingi saseNingizimu-mpumalanga ye-Asia sithumele amabutho angaba ngu-340,000 emadolobheni angaphezu kuka-20 ukuzobheka imisebenzi okuhloswe ngayo ukunqanda ukuqubuka.
Impela, amaphoyisa asentshonalanga nesifundazwe saseBangkulu athumele ithimba labantu abangama-40 ukuthi lithole ama-Lockdown Breakers futhi libaphoqa ukuthi bagqoke amakhodi anezethembiso zokugqoka imaskhi ebusweni futhi balondoloze ukungahambisani nomphakathi. Izithombe zabephula umthetho bese zibekwa kwimithombo yezokuxhumana ukuze zisebenze kakhulu, ngokusho kwesikhulu. Kude ngasenyakatho, esifundazweni i-Aceh, labo abaphula imithetho baye baphoqelelwa ukuba bafunde izindinyana ezivela kuKoran, umbhalo osenkolweni wamaSulumane. Iqembu elincane elingewona amaSulumane livikelekile ekujezisweni, kepha.
06: 00 Uhlelo lokuvikela umsebenzi ku UK silethwe ngenxa yokudlanga kwalesi sifo ngeke siqhubeke unomphela, kusho uNgqongqoshe Wezemvelo uGeorge Eustice, njengoba iBrithani ibheka ukudambisa izindlela zokuvala umnyango.
"Uhlelo lwe-furlough lubaluleke kakhulu mayelana nokugcina abantu bemi futhi sebelungele ukubuyela emsebenzini," utshele iSky News. "Ngokusobala njengoba siqala ukuphuma kulolo hlu bese siqala ukubuyisela umnotho wethu emsebenzini, ngeke sikwazi ukugcina abantu kulesisikimu se-furlough unomphela."
"Sidinga ukuqala ngokuthola izindlela zokubasusa ohlelweni lwe-furlough bese sibuyela emsebenzini ... Sidinga uhlelo lokuhlanza olungaxoshwa njengoba abantu bebuyela emsebenzini."
05: 15 UNdunankulu wase-Australia uScott Morrison uthe ezinye izindawo zomnotho wezwe zizodinga ukukhushulwa okwengeziwe. Uhulumeni wase-Australia kanye nebhange eliphakathi sesifungile ukuthi sizosebenzisa i-AU $ 250 billion ($ 166.1 billion, € 149.8 billion) ukugwema ukudana okudala ngenxa yalolu bhubhane.
04: 45 IChina ihlela ukwelula a ukuvinjwa ezindizeni zamazwe aphesheya Kuze kube nguJuni 30, inxusa laseMelika eBeijing lisho kanjalo ngokululekwa kwezokuvakasha.
Izwe selinciphise kakhulu izindiza zamazwe omhlaba kusukela ngoMashi, nokusetshenziswa kwenqubomgomo ebizwa ngokuthi “Amahlanu”, evumela izindiza zakwamanye amazwe ukuba zisebenzise indiza eyodwa nje ngesonto ziye eChina, nabazithwala ezwenikazi ukuqhuba indiza eyodwa ngesonto kunoma yiliphi izwe.
I-China ibike amacala angaphezu kuka-84,000 aleli gciwane, kanti inani labangu-4,638 XNUMX labafa.
03:55 Inani lamacala aqinisekisiwe eJalimane inyuke ngamaphesenti angama-741 yaya kwangama-180,458 24 emahoreni angama-39 edlule, isikhungo saseJalimane sezifo esithathelwanayo simemezele. Isikhungo iRobert Koch Institute siphinde samemezela ukufa okusha okusha okuyi-8,450, okwenza isibalo sokufa sabalelwa ku-XNUMX.
IGermany iphakathi nesikhathi eside sokukhawulelwa kwemikhawulo empilweni yomphakathi. Amabhizinisi afuna ukwenza inzuzo elahlekile.
Esimweni esinabantu abaningi kakhulu eNorth-Rhine Westphalia, izibalo zezindaba zibonisa ukuthi zonke izinhlobo zamanani obugebengu zehlile selokhu kwaqala lolu bhubhane. Yize kunokwesatshiswa kokuthi amanani ezodlame lwasemakhaya angakhuphuka, kube nokwehla okuqhubekayo kwezigameko ezibikiwe kusukela ngoMashi 1 uma kuqhathaniswa neminyaka edlule, iphephandaba laseJalimane iphephandaba. I-Rheinische Post kubikwe ngoLwesihlanu. Ochwepheshe baphakamise ukuthi ukuncipha kungenzeka kube nje ezenzweni ezimbalwa zokubulawa.
03: 20 IColombia inwebe ukuvalwa kwayo kuze kube kuphela uJuni, uMengameli wezwe u-Ivan Duque umemezele ngoLwesine. Izwe laseLatin America belilokhu lingaphansi kwemikhawulo kusukela ngoMashi. UDuque uthe iColombia isazoqhubeka nokuvula eminye imikhakha ukuze ivuselele umnotho wayo, yize kukhona eminye imikhawulo eqhubekayo.
IColombia njengamanje ivundulula izikhungo zokuthenga, iminyuziyamu kanye nama-salon ngendlela ngezigaba, kuya ngokuvumelana kwabaphathi bendawo. IMeya yaseBogota iveze ukuthi imikhakha emisha yezomnotho enjengezindawo zokucima ukoma nezitolo ngeke ivuleke kuleli dolobha. UDuque umemezele ukuthi izindiza zaphesheya zizoqala kabusha ngoSepthemba 1.
02:52 ENingizimu Korea kubikiwe Amacala amasha angama-58 e-coronavirus, wonke eSeoul. Iziphathimandla zixhumanise ukuhanjiswa esigcini se-e-commerce esiseduze nedolobha.
Izwe belikhona isikhashana, libika ukuthi awekho amacala amasha e-COVID-19, kodwa kuleli sonto liphinde lafaka eminye imikhawulo evaliwe ngemuva kokuthi iziphathimandla zezempilo zikhathazekile ngamaqembu amasha ezifo. Sekukonke, sekubikwe amacala amasha ayi-177 kulezi zinsuku ezintathu ezedlule.
Iziphathimandla manje zifuna ukuqedela ukuhlolwa kubasebenzi abangu-4,000 nezivakashi ezitolo. Sekukonke, amacala ayi-11,402 269 aseqinisekisiwe kanti sekushone abantu abangama-XNUMX.
Umkhiqizo wezezimboni eJapan wehle ngo-02% ngo-Ephreli kusuka enyangeni edlule, inyanga yesithathu eqondile yokwenqaba.
Ukwehla bekuqinile kunokuba bekucatshangelwe ukuthi ama-5.7% ayehla lapho abahlaziyi bebikezela. Amasheya eTokyo abuye avulwa ephansi ngoLwesihlanu, ukulandela ngomkhondo kuwela kuWall Street.
Isimo esiphuthumayo saphela esifundeni saseJapan ngoMsombuluko, kufaka neTokyo, ngaphambi kokuphela konyaka ngoMeyi 31. Ochwepheshe banethemba lokuthi umnotho uzokwazi ukukhipha njengoba amabhizinisi eqala ukuhweba futhi. Izinga lokuntuleka kwemisebenzi kuzwelonke nalo lenyuke lafika ku-2.6% uma liqhathaniswa ne-2.5% enyangeni edlule.
01:33 Isimo sase-Australia saseNew South Wales (NSW) umemezele ukuthi ubhubhane lwe-coronavirus lungabiza imali elinganiselwa ku-AUS $ 20 billion ($ 13.3 billion, cishe u- $ 12 billion) kwimali elahlekile eminyakeni emine ezayo. Isifundazwe eseningizimu-mpumalanga yindawo yezomnotho yezwe.
"Sibhekene nohlobo lwenselelo yomnotho engazange ibonwe ezizukulwaneni ngezizukulwane, mhlawumbe hhayi ngoba abantu bagcina ukufaka izimbangi eSydney Harbour Bridge ngeminyaka yama-1930s," kusho uN Treasurer Dominic Perrottet we-NSW.
Isilinganiso sokushoda kwesabelomali esiphakathi kuka-AUS $ 10 wezigidigidi no-AUS $ 20 wezigidigidi sikhuphuke kakhulu kusuka kusilinganiso sokubuka kuqala ngoDisemba ka-2019, ngaphambi kokuba ubhadane luqale, olulinganise isabelomali esengeziwe semali engu-AUS $ 1.9 billion.
Izindlela zokunciphiswa kwezenhlalo zizoqala ukuphakanyiswa kwi-NSW ngesonto elizayo esifundazweni esesibone ingxenye yamacala e-Australia abona nge-coronavirus. Amacala angaphezu kuka-7,000 aseqinisekisiwe e-Australia kanti sekushone abantu abayi-103.
01:10 I-US iqophe ukufa kwe-coronavirus eyi-1,297 ngaphakathi kwamahora angama-24 edlule, kuletha inani lazo laya ku-101,573 selokhu kwaqala lo bhubhane. Kube nezigameko ezingaphezu kwezigidi eziyi-1.7 ze-COVID-19 e-US, izwe elihlaseke kakhulu emhlabeni jikelele ngokwemibandela.
IMeya yaseNew York uBill de Blasio usebalule nezinhlelo zokuvumela amakhulu ezinkulungwane zaseNew Yorkers ukuthi zibuyele emsebenzini ezinsukwini ezizayo. Idolobha laseMelika elinabantu abaningi kunazo zonke liye laba yithina elibi kakhulu futhi laphinde laba ngaphansi kokuvalwa okuqinile kakhulu ezweni.
00:45 AmaHouthi adlubulunda e-Yemen ngikwamukele okokuqala ukuthi ama-coronavirus asabalale kumakhosi amaningi ngaphansi kokulawula kwawo. UMnyango wezeMpilo eHouthi uthe basebenzela ukulandela umkhondo wamacala angawodwa.
Abavukeli baphinde basola iWorld Health Organisation ngokubathumelela “izivivinyo ezingalungile” nezingafanele.
Uhulumeni owaziwa wumhlaba wonke owaziwa ngeM Yemen obangelwe yimpi uye wabika amacala angama-278 nokufa kwabangu-58, nokwesaba okuvela emiphumeleni emibi kakhulu yokuqubuka kwesimo esikhulu esinikezwe isimo esingesihle sohlelo lwezempilo lwaleli lizwe nokudla kwalo okuntekenteke.
00:30 i-Mainland China ibike ukuthi akukho amacala amasha aqinisekisiwe ye-coronavirus kusukela ngasekupheleni kukaMeyi 28, phansi kusukela kabili ngosuku ngaphambili. Kube nezigameko ezintsha ezinhlanu ze-asymptomatic ze-coronavirus ezweni.
UNdunankulu waseChina uLi Keqiang uthe iChina inethuba lokuqhakambisa umnotho kulandela ukudodobala kwezomnotho, kepha kafuni ukuvula "amasango ezikhukhula." Umnotho waseChina uhlupheke kakhulu ngo-6.8% kwikota yokuqala yonyaka, izwe lahlaselwa ubhubhane oluqale eWuhan.
00:05 IBrazil iqophe ukugxuma kwayo okukhulu kosuku olulodwa emacaleni. Izwe laseNingizimu Melika linesibalo sesibili esiphezulu samacala ngemuva kwe-US, kanti kubikwe amacala amasha angama-26,417 24 kungakapheli amahora angama-1,156. UMnyango Wezempilo uqophe ukufa kwabantu abasha abayi-26,754 ngasikhathi sinye, kwaletha inani lokufa kwabangu-438,238 XNUMX kanye nenani lamacala laya ku-XNUMX.
00: 00 Ungathola izibuyekezo zethu zokugibela kusuka ngoMeyi 28 lapha
ed / mm (AFP, AP, dpa, Reuters)
Ekubikeni ngesifo se-coronavirus, ngaphandle kokuthi kuchazwe ngenye indlela, i-DW isebenzisa izibalo ezinikezwe yiJohn Hop Hop University (JHU) Coronavirus Resource Center eMelika. I-JHU ivuselela izibalo ngesikhathi sangempela, idatha ehlanganisa izinhlangano zezempilo zomhlaba, ohulumeni bezwe kanye nohulumeni kazwelonke neminye imithombo esemthethweni yomphakathi, bonke abanezinhlelo zabo zokuhlanganisa imininingwane.
Izibalo zikazwelonke zaseJalimane zihlanganiswa yisikhungo sayo sezempilo yomphakathi, iRobert Koch Institute (RKI). Lezi zibalo zincike ekudlulisweni kwedatha kusuka kumazinga wombuso nawasekhaya futhi zivuselelwa kanye ngosuku, okungaholela ekuphambukeni kwaJHU.
I-DW ithumela ukukhethwa kwezindaba nsuku zonke nezimpawu zansuku zonke. Bhalisa lapha.
Lesi sihloko sanyatheliswa ekuqaleni Deutsche Welle.
Thumela Previous Izimbiza Zelenskyy zase-Ukraine Zibuyele Ezingxoxweni Zokuthula NoPutin waseRussia
Post Next ULouvre ulungiselela ukuvula kabusha uJuni 6 njengoba iFrance inciphisa ukuvalwa kwe-Covid-19
Ingabe i-coronavirus ingasiza ekusindiseni iplanethi? | Qala Lapha
I-Planet Earth yabamba ikhefu ngesifo se-COVID-19. Ngaphansi kwe-Lockdown akekho owayeshayela, endiza noma ekhiqiza. Kukhipha i-Carbon.
I-UAE iyalela ukusatshalaliswa kukahulumeni njengoba igciwane lifinyelela izinzuzo zezomnotho
I-DUBAI, United Arab Emirates - Izwe lase-United Arab Emirates limemezele ukuthi kuzothuthukiswa uhulumeni ngohlelo oluzoba ngeSonto okuhloswe ngalo ukwakha ugesi